Banyere Anyị - Fuzhou Juan Juan Non-kpara Products Co., Ltd.
Nabata na JUANJUAN
Juan Juan bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta mmiri na-emepụta ihe na mmiri. Juan Juan. anọgidewo na-agbanwe kemgbe mmalite anyị na 2010. Ugbu a nke dị na Fuzhou, China, ihe nketa anyị na ọdịnihu anyị agbakwunyere na ozi anyị ka anyị bụrụ onye na-enye ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na-ehichapụ na akwa nhicha na ahịa na ahịa. Dị ka OEM onye maka ụwa nnukwu ụdị, Anyị na-enye a keukwu akara nke Asatọ n'ụzọ zuru ezu akpaka mmepụta akara maka pouch ekpochapụ na n'ụzọ zuru ezu akpaka mmiri mmiri ndochi mmepụta akara maka tragaasi ụdị disinfecting hichapụ na mmanya na-ehichapụ na anyị onwe anyị na ịkpụzi HDPE tragaasi na eyi mkpuchi mmepụta akara .Daily Productivity bụ 250,000 ngwugwu / canisters.
Anyị factory tụkwasịrị obi ọtụtụ nke ụwa kasị Hotel na china na Jeriko na-anọgide na-anapụta mbụ na klas na ngwaahịa na-agụnye nwa ahụ ehichapụ, ịchọ mma hichapụ, ooh mposi anụ ahụ na ezinụlọ ihicha ekpochapụ, rags, akwa nhicha, wdg Anyị na-abịa a ogologo ụzọ afọ iri gara aga, mana anyị ka na-eme otu mmụọ mmụọ achụmnta ego na mkpebi siri ike iji chọta ụzọ ka mma maka nhichapụ nwa na-enweghị plastik na nkwakọ ngwaahịa BPA zuru oke na nhichapụ flushable, wdg.
Juan Juan bụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na-akpali akpali, na-enwe nnukwu uto na ihe karịrị mmadụ 200 nwere nkà na-arụkọ ọrụ ọnụ na ogige ụlọ ọrụ anyị. Anyị azụmahịa e wuru ọhụrụ, na-emepe emepe ọhụrụ echiche echiche bụ ihe na-akpali anyị n'ihu na Bara Uru "can gaghị ehichapụkwa nsogbu niile nke ndụ, dị nnọọ ka ọ ga-ekwe omume"
I.Non kpara Fabric
Excellet disinfecting na-ehichapụ sitere na mma dị elu nke akwa a kpara akpa, akwa anyị a kpara akpa bụ nke ndị ama ama ama ama A.Celli Group mepụtara.
Akụkọ ihe mere eme nke otu A.Celli malitere na njedebe nke Agha Secondwa nke Abụọ, na 1945. Na mbido 1980s, ezinụlọ Celli ghọtara na ha nwere ike itinye teknụzụ mepụtara karịa, dị ka teknụzụ akwụkwọ, gaa n'ọhịa na-adọrọ mmasị. Thelọ ọrụ nke nonwovens ejirila winders na slitting rewinders si ụlọ ọrụ textile, bụ nke a maara nke ọma na ọ dị nwayọ nwayọ ma ọ bụghị nke siri ike.
Site na nghọta Piero na Marco Celli, site na iwebata ndị siri ike, ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ndị na-agba ọsọ ọsọ, ụlọ ọrụ ahụ na-ezute ihe ịga nke ọma ozugbo na ndị isi Italiantali na-abụ ndị ahịa ya. Pantex, Tenotex, Fiberweb bụ ụfọdụ n'ime ndị na-emepụta uru nke teknụzụ A.Celli ohuru iji bulie usoro ha na arụpụta ihe. A.Celli Pụrụ iche na winding, slitting, roll roll njikwa na nkwakọ ngwaahịa. Ngwaahịa ahụ na-agụnye sistemụ akpaaka mma, akpaka na-egbutu isi na usoro njikwa, yana ọtụtụ ọrụ nwere ike mbipụta. A.Celli Nonwovens na-enye usoro dị iche iche nke windo windo na slitter-rewinders nke na-egosipụta usoro ọkaibe nke ahaziri iche maka spunbond, spunmelt, spunlace na airlaid nonwovens mpịakọta ngwaahịa na-elekwasị anya pụrụ iche na akwa dị arọ na mmepụta ọsọ ọsọ.
II.Wet Ehichapụ Machinery
N'ime afọ 10, anyị ejirila ụdị 5 nke igwe na-ehichapụ igwe, Omume bụ onye nkuzi kachasị mma, yabụ anyị kwalite ma melite mmepụta mmiri na-ehichapụ usoro yana ndị na-eweta ngwa ọrụ anyị ihe karịrị afọ 10. N'oge a, àgwà nke nhichapụ mmiri anyị (gụnyere obere nhichapụ na-ehichapụ mmiri) bụ ihe ka ukwuu ma kwenye na ahịa. Ugbu a, anyị nwere akara mmepụta asatọ maka nhichapụ na arụpụta kwa ụbọchị nke 200,000 packs / rolls.
III.Canister ụdị disinfecting na-ehichapụ (mmanya na-ehichapụ)
Dị ka ọkachamara oem ibe maka ụwa ama ụdị, anyị nwere onwe anyị igbu ịkpụzi igwe na-eme ka HDPE tragaasi na Ọgwụ na ịkpụzi igwe na-eme ka mkpuchi mkpuchi, Anyị kwa ụbọchị arụpụtaghị bụ 200,000 canisters / lids n'oge a.
Ọ bụghị naanị na onwe labeelu, kamakwa omenala imewe nke tragaasi ga-anabata maka nke gị ụdị.
IV. Igwe na-ejuputa mmiri mmiri maka ikpochapu mkpochapu.
Anyị arụpụta bụ 24000 canisters kwa awa na izi ezi nke 0,1%.
Site n'iji igwe eji emeju akpaka, enwere ike mezuo nnukwu ahihia nke kpochapu ahihia n'oge.
Nweghị ike ihichapụ nsogbu niile nke ndụ, chee naanị na ọ ga-ekwe omume!